Internet Download Manger ( Full Version and Protable Version ) လိုချင်သူများအတွက်
IDM လေး တင်ပေးမယ်ဆိုပြီ အခုမှတင်ဖြစ်တာလေ။ IDM ကို Update လုပ်မိသွားလို Trial ပြသာနာ ကိုရှင်းပေးတဲ့ Path ဖိုင်လေးရယ်။ အလွယ်သုံးချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် Protable လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
IDM Software - Download Trial Version Error Fix Path - Download
IDM Protable - Download
Warmly Welcome MITA Group
ကျွန်တော်တို့Myanmar IT Academy ရဲ့ Group သို့ Join ပြီ။ နည်းပညာအကြောင်းများကိုအကူအညီတောင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဆွေးနွေးချင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ။ ကိုယ်လေ့လာထားသော နည်းပညာများကိုလဲ ၀င်ရောက် share နိုင်ပါသည်။နည်းပညာနှင့်မဆိုင်သော Post များ ကို မတင်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။။ မိတ်ဆွေများအားလုံးအား နွေထွေးစွာကြိုဆိုလျက်။ We try together for our country.https://www.facebook.com/groups/MyanmarITAcademy/
<!-local time clock widget - html code - localtimes.info --> Time in Rangoon <!-end of code-->
Visitor Help Box
<!-my calendar widget - html code - mycalendar.org -->Holiday Calendar<!-end of code-->
Myat Than Tint ( IT & Music Notes)
Basic Security Testing Kali Linux2EBook လေ့လာချင်သူများအတွက်
Kali Linux2 Ebook လေးရထားလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Kali Linux2 Ebook ထဲ့မှာ
Kali Linux Introduction and Overview,Shodan (the “Hacker’s Google”)
Operating System မှာ အများဆုံး Support လုပ်နိုင်တဲ...
Foxit Reader & Adobe Reader Latest Version လိုချင်...
Mozilla Firefox တွင် Video Download Helper Add-ons...
Andriod ဖုန်းတွေမှာ System Maintaince လုပ်တဲ့ Dx T...
Office 2013 Activator Toolkit လိုချင်သူများအတွက်...
Samsung ဖုန်းတွေမှာ PC နဲ Connect လုပ် ရင် လို တ...
Malwarebytes Anti-Malware Latest Version လိုချင်သူ...
VRoot_1.6.0 English Version လိုချင်သူများအတွက်
Office 2010 Toolkit Crack လေးပါ။ လိုချင်သူများအတွ...
Mobile Backup II APK လေးသုံးပြီး SMS တို့ Contac...
WhizzoTyping Tutor လေး လိုချင်သူများအတွက်
TuneUp Utilities 2014 လေး သုံးကြ ရအောင်ဗျာ။
Driver Magician လေး သုံးပြီး Driver Backup လုပ်ရအေ...
CCleaner Latest Version လိုချင်သူများအတွက်
Process Explorer Latest Version လိုချင်သူများအတွက်...
Google Earth Software For Pc လိုချင်သူများအတွက်
Ultra Surf Proxy Latest Version လိုချင်သူများအတွက်...
WinRaR Compressed လိုချင်သူများအတွက် (Free Downl...
Google Chrome Latest Version Free Download (For PC...
Internet Download Manger ( Full Version and Protab...
Skype Latest Version (For PC) လိုချင်သူများအတွက်
VLC Player Latest Version လိုချင်သူများအတွက်
Gmail Guide Ebook လေးပါ။
Avast Antivirus Offline Updates
Kaspersky Antivirus offline update ဆွဲချင်သူများအ...
AVG Antivirus Offline Updates
Avria Antivirus Offilne Updates
Adobe Photoshop CS3 Lite Software လေးပါ။
ESET NOD32 Antivirus Offline Updates
Microsoft Security Essentails Update
Huawei ဖုန်းတွေအတွက် Google Play Application သွင်း...
V ROOT Latest Version 1.6.0 ( Root Master လေးပါ)
Myanmar IT Academy
MITA (Apk Installer)
ကျွန်တော်တို့ Myanmar IT Academy blog ၏ update post များကို သင့် Mobile ဖုန်းတွင်ဖတ်နိုင်ပါပြီ။နည်းပညာတိုးတက်ပါစေ။
Andriod Driver Tools (For PC)
Andriod Root Tools
Anniversary Photo Collection
Antivirus Software ( For Windows)
Cisco Ebook Collection
Computer Basic Ebooks
Crack Tools ( For Windows)
Electronic Software (For PC)
Hardware EBooks Collection
I Device Ebook Collection
Linux Eook Collection
Mac OS Video Tutorial
Microsoft Server Ebook Collection
MITA APK file (for Andriod Moible)
Networking EBook Collection
One Year Photos (MITA)
PDF Software (For Windows)
System Software (For Windows)
Video Training Collection
Windows and Driver Pack Soultion
Windows Theme Packs
New Post Read Email
Myanmar Fonts ( Alpha Zawgyi,Myanmar2, Myanmar3)
Myanmar Fonts တွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Alpha Zawgyi ရယ် ၊ အစိုးရရုံးတွေအသုံးများတဲ့ Myanmar2font ရယ် ၊နောက်နှစ်တွေမှာ windows တွေမှာပါလာ...
Computer Service သမားတွေအတွက် Windows ပြန်တင်စရာမလိုတဲ့ One Key Recovery ပြုလုပ်တဲ့ UserGuide Ebook လေးပါ။
မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ Microsoft Windows တွေကိုတစ်ခါတင်ထားပြီးရင် ထပ်တင်စရာမလိုတဲ့ Windows တစ်ခုလုံး ကို W...
ကျွန်တော်တို့ MITA Blog မှာ Download လုပ်ရင်အဆင်မပြေသောမိတ်ဆွေများအတွက် Download လမ်းညွန့်လေးပါ။
Download လုပ်လိုအဆင်မပြေသောမိတ်ဆွေများအတွက် နည်းလမ်းလေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Download Link ကို solidfiles ကပဲတင်ပေးတာများတယ်လေ။ solidfiles...
Command.Guide.CCNA.Routing.and.Switching EBook လိုချင်သူများအတွက် ဒီစာအုပ်လေးကတော့ Cisco လေ့လာနေသောမိတ်ဆွေများအတွက် အခြေခံ Routingand Switching Command Guide EBook လေးပါ။ CCNA ဖြေမယ်သူကော မဖြေပဲနဲ S...
Certified Ethical Hacker FULL Course PDF | CEH v8 လေ့လာချင်သူများအတွက်
မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Certified Ethical Hacker FULL Course PDF တွေရထားလို Share ပေးလိုက်ပါတယ်။ Ebook တွေကတော...
CreateSpace.Cisco.CCNA.Networking.For.Beginners ဆိုတဲ့ Ebook ကောင်းလေးပါ။
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ CCNA အခုမှစလေ့လာမဲ့ လူများအတွက် စာအုပ်ကောင်းလေးရထားလို Share ပေးလိုက်ပါတယ်။စာအုပ်ထဲ့မှာတော့ Networks and t...
Kali Linux အကြောင်းလေ့လာချင်သော မိတ်ဆွေများအတွက် Basic Security Testing with Linux စာအုပ်လေးပါ။
Kali Linux ကတော့ Back Track နောက် ကထွက်လာတဲ့ Hacker တွေအသုံးပြုတဲ့ Operation System တစ်မျိုးပါ။ Hacking တွေ ကော Security တွေ ကော ပြ...
ကျွန်တော်တို့ MITA BlogမှDownload လုပ်ရင်အဆင်မပြေသောမိတ်ဆွေများအတွက်FilepiမှDownloadလုပ်နည်း။
Fig(1) Filepi မှ Download လုပ်ရင်တော့Fig (1) မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Register လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး Random ပေးထားတဲ့ Number လေးတွေကိုဖြည့်ပြီ...
Cisco လေ့လာနေသောမိတ်ဆွေများအတွက် Cisco_Packet_Tracer_6.2_With_Labs တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ Cisco လေ့လာနေသော သူများအတွက်အများကြီးအထောက်ကူပြုမယ့် Data တွေ ရထားလို Share ပေးလ...
Now Visitor List
This blog content is copyright 2013-2015 to the blog owner you can't copy or edit content without its owner permision. Powered by Blogger, Template by blogger widgets